समाज Archives - Enepal Serofero
पतिको यौन प्रस्ताव केही न केही बहाना बनाएर टार्थिन् पत्नी, एक दिन इमेलमा आयो यस्तो
एजेन्सी। व्यवसायिक कामको लागि बाहिर जान लागेकी एक महिला त्यतिबेला निकै चिन्तित भइन् जब उनी घरबाट हिँडेको केही बेरमै उनका पतिको इमेल आयो । यो इमेलमा उनका पतिले एउटा एक्सेल शिटमा पठाएको थिए । त्यसमा कारणसहित सबै विवरण थियो कि महिलाले कहिले के बहाना बनाएर उनीसँग यौन सम्बन्धको लागि अस्वीकार गरेकी थिइन् । यो देखेर चिन्तित महिलाले त्यो सबै सामाजिक संजालमा शेयर गरिदिइन् । ४ वर्ष पहिलेको यो पोस्ट अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ । पतिले पठाएको विवरणअनुसार तीन महिनामा उनले पत्नीसँग २७ पटक यौन प्रस्ताव राखेका थिए जसमध्ये उनले ३ पटक मात्र मानेकी थिइन् । बाँकी २४ पटक उनले फरक फरक कारण देखाउँदै यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । केही पटक भने पत्नीले बिना कारण पनि प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । महिलाका अनुसार उनले आफ्ना पतिको यस्तो खराब, असामान्य र रिसाहा रुप कहिल्यै देखेकी थिइनन् । इमेल पाउनासाथ उनले पत
यी हुन् घास काटेर नर्स बनेकी चेपाङ चेली , अध्ययन सकेर नर्स बनेकी सरिता अहिले जागिरको खोजीमा
चितवन – धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर १०, लैताककी सरिता चेपाङ २० वर्षकी भइन्। गाउँमा उनका उमेरका चेपाङ युवती सबैले बिहे गरिसके। उनीसँगै स्कुल पढ्ने ती साथीहरूले एसएलसी तहको अध्ययन पनि पूरा गरेनन्। तर सरिता गाउँमै पहिलोपटक आफ्नो समुदाय बाट नर्सिङ पढाइ पूरा गर्न सफल भएकी छन्। यसै वर्ष नर्सिङ अध्ययन उत्तीर्ण गरेकी उनले नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्ससमेत लिइ सकेकी छन्।उनका एक दिदी, दुई बहिनी र एक भाइ छ न्। पाँच सन्तानमध्ये उनी पढाइमा मेहनती थिइन्। अभिभावकले पनि पढ्न प्रोत्साहन गरे। घरबाट २० मिनेट लाग्ने चित्रकला प्राथमिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म पढिन्। त्यसभन्दा माथि पढ्न एक घण्टा हिँडेर श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जानुप-यो।बारीमा फल्ने मकैले परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो। तरकारी खेती बाट हुने आम्दानीले घर खर्च मिलाएर बुबाआमाले आफूलाई पढाएको सरिताले सुनाइन्। काउली,
आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ
ताप्लेजुङ : आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ताप्लेजुङमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । सिरिजङ्गा गाउँपालिका–२ आम्बेगुदिनस्थित २० वर्षीया युवतीले आफ्नै २४ वर्षीय श्रीमानले गत असोज ८ गते बलात्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । बलात्कार आरोपपछि लुकिछिपी बसेको अवस्थामा जिल्लाकै आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–४ चाँगेबाट ती पुरुषलाई पक्राउ गरिएको हो । उनलाई बिहीबार जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडी बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । दोषी ठहर नभएसम्म आरोपितको नाम प्रहरीले गोप्य नै राखेको छ । यसबाहेक ज्यान मार्ने मुद्दामा पक्राउ परेका फुङलिङ नगरपालिका–२ का २२ वर्षीय विकास लिम्बू कारागार चलान भएका छन् । गत मंसिर ५ गते गाउँकै ३० वर्षीय पुरुषलाई डण्डी प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेका लिम्बूलाई मंसिर ७ गते प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेस ग
आलोक यादव ,सिरहा, २०७५ पौष ०५ गते । मिर्चैया नगरपालिका –७, फूलबरियको महराटोलमा तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको दलित बस्तीको जमिन वडा कार्यालयले दिएको गलत सिफारिसका कारण बिक्री भएको छ । जग्गा धनीलाई पैसा तिरेर झण्डै ९० वर्षदेखि वस्दै आएको दलित बस्तीको जमिन वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष रामकुमार यादवले जग्गामा घर नभएको भन्ने सिफारिस दिएको आधारमा जग्गा व्यवसायीले खरिद गरेका छन् । बस्ती भएको जमिन बिक्री भएको खबर पाएपछि बस्तीका दलितहरुको भोक प्यास हराएको छ । उनीहरु कहिले वडा कार्यालय, कहिले नगरपालिका कार्यालय, कहिले मालपोत त कहिले अधिकारकर्मीकोमा धाइरहेका छन् । सम्पत्तिको नाममा रहेको त्यही बस्ने थातथलो पनि गुम्ने त्रासमा रहेका छन् उनीहरु । जमिन बिक्री भएको खबर पाएपछि यहाँ रहेका २८ घर परिवार छटपटीमा परेका छन् । आफ्नो बुवाले नै पैसा तिरेको भए पनि साहुले जमिन पास नगरेपछि तीन पुस्तादेखि आफूहरु बस्
भरखरै विहे गरेर आएकी महिलालाई यसकारण खुट्टामा बाँधेर राखियो
विवाहमा रेफ्रिजे्रटर दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलालाई घरपरिवार मिलेर सास्ती दिएका छन् । भारतको झारखन्ड राज्यमा अवरुण नाम गरेकी महिलालाई पतिसमेत घरका परिवार मिलेर यातना दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ती महिलालाई यातना दिने क्रममा दुई वटै खुट्टामा फलामको सिक्रीले बाँधेर राखिएको थियो । उनलाई चार दिनसम्म पति, सासु र ससुराले खानसमेत दिएका थिएनन् । ती महिला भागेर प्रहरीमा उजुरी दिने डरले पतिसहितका घरपरिवारले उनलाई फलामको सिक्रीले बाँधेर ताला लगाउने गरेको प्रहरी भनाइ छ । ती महिालकी आमा आएर प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्रै उद्दार गरिएको थियो । पीडित महिलाकी आमा नसीबुनका अनुसार उनले छोरीको विहे गरिदिएको एक हप्तामात्रै भएको थियो । यो पनि पढ्नुस : दाइजोका लागि केसम्म गरिनन् यी महिलाले, पुरुष बनेर २ महिलासँग विवाह अवरुण उनका पति रजाबुल अन्सारीले खुसी राख्ने बचन दिएर विहे ग
अर्काको सहायतामा हिँडडूल, आफ्नै पौरखमा गुजारा
काठमाडाैं – सुन्धारा नजिकैको व्यस्त सडकमा पैदल हिँड्नेदेखि सामान किनबेच गर्नेसम्मको घुईंचो छ । यही व्यस्त सडकको एक छेउमा स्याङ्जाकी गीता भुषाल पनि हुनुहुन्छ । शारिरीक रुपमा अशक्त उहाँले बिभिन्न प्रकारका खेलौना तथा उपहारका सामानहरु बेच्नको लागि राख्नुभएको छ । त्यहाँ बेच्न राखिएका सबै सामानहरु उहाँ आफैंले बनाउनुभएको हो । हातले बनाएका खेलौना, पर्स र क्यापहरु बेच्न राखिएका छन् । ऊनबाट बनाइएका यी सामानहरु हेर्दै किनौं किनौं जस्तो लाग्छ । गीता यसरी नै आफैंले बनाएका सामान बेचेर आयआर्जन गर्नुहुन्छ । उहाँलाई लाग्छ, मान्छेको दिमाग मात्र चले पनि मागेर खानु पर्दैन । उहाँ ह्विलचियरको सहायताले हिँडडुल गर्नुहुन्छ । ‘जन्मदै खुट्टामा समस्या थियो रे’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दुबै खुट्टा धेरै छोटा भएकाले हिँड्न मिल्दैन, यही ह्विलचियरले सघाएको छ ।’ उहाँलाई ह्विलचिएर चलाउन पनि अरुकै सहायता चाहिन्छ । नियती
यस्तो कसैलाई दुख नपरोस: दुलही भित्र्याउन सिंगारिएको घरबाट शव निकाल्ने तयारी
बाँकेको समशेरगञ्जस्थित ओभरी गाउँ शोकमा डुबेको छ। बिहेको उत्सवमा रम्नुपर्ने ओभरी गाउँ दुलाहाका बाबुआमासहित ६ जनाको मृत्युको खबरले शोकमा डुबेको हो। बिहीबार बिहानै दाङमा भएको दुर्घटनामा परी चितवनबाट दुलही ल्याएर फर्कदै गर्दा दुलाहाका बाबुआमा र आफन्तसहित ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुलाहाका बाबु अर्थात् ५३ वर्षीय मानबहादुर केसी राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित शिव शक्ति मावि तेरानीका शिक्षकसमेत हुन्। केसीले आफ्नो कान्छो छोरा यज्ञबहादुर केसीको बिहेको लागि गाउँभर निम्ता बाँडेका थिए। घरमा बिहेको उत्सवमय वातावरण एकाएक नाटकीय ढंगले शोकमा परिणत भएको हृदयविदारक घटना शब्दमा वर्णन गर्न नसकेको स्थानीय बताउछन् । बिहेको उल्लासमा रमाइरहेका आफन्त, पाहुना र छरछिमेक आँशुमा डुबेको छ । बिहेमा बज्नुपर्ने गीत संगीत र बाजाको ठाउँमा उल्टो शंख फुक्नुपर्ने कारूणिक घटना भएको स्थानीयले बताए। शमशेरग
नेपालीसँग नक्कली बिहे गरेको भन्दै युवतीलाई ५ बर्ष जेल
मंसिर २७ – अमेरिकामा बस्दै आएका एक नेपाली युवकसँग नक्कली बिहे गरेकी एक महिलालाई अमेरिकी अदालतले ५ वर्षको जेल तथा २ लाख ५० हजार डलर जरीवानाको सजाय सुनाएको छ। अमेरिकाको मेन राज्यस्थित ह्याम्पदेन सहरमा बस्दै आएको २८ वर्षीय मरिना मुशेरोलाई मेनस्थित जिल्ला अदालतले आर्थिक प्रलोभनका लागि नक्कली बिहे गरेर अमेरिकी अध्यागमन कानुनको उल्लङ्घन गरेकोमा दोषि ठहर गर्दै सो सजाय सुनाएको हो। सरकारी अधिवक्ता हल्से फ्रयांकद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार मरिना मुसेरोले आर्थिक रकमका लागि आफू बिहे गर्न तयार भएको जानकारीसहित अनलाइनमा एक विज्ञापन दिएकी थिइन्।जस अनुसार, गत जुन १३ गते एक नेपाली युवकले इच्छा देखाएका थिए। विज्ञप्तिमा ती युवकको नाम खुलाइएको छैन। अमेरिकी ग्रिन कार्ड पाउने आशाका साथ नेपाली युवकले गत जुन २५ गते मुसेरोसँग मैन राज्यको ब्रिवर सहरमा बिहे गरेका थिए। मुशेरोसँग अदालतमा बिहे गरे पन
श्रीमानले छाडे तर भगवानले साथ छाडेनन्…
रुपले रुवाउँछ, सीपले खुवाउँछ’ यो उखान नौमूले बजारमा सिलाई कटाई पेशा गर्दै आएकी ३१ वर्षीया पबी गुरुङ्गको जीवनमा चरितार्थ भएको छ ।जवानी फक्रिँदै गरेको बेला १६ वर्षकी छँदा २०६० सालमा गाउँकै सन्तबहादुर लामिछानेसँग पबीकाे विवाह भयो । २०६७ मा श्रीमानले छोडे तर उनलार्इ सिलाइकटाईको सीपले साथ दिएको छ । सन्तबहादुर पबीकाे गाउँकै इष्टमित्रका छोरा हुनुुहुन्थ्यो, पबीकाे पनि बिहे गर्ने मन भयाे, अनि दुवै पक्षका घरपरिवारको सहमतिमा पबी र सन्तबहादुरको विवाह भयो । विवाह भए को पछिल्लो वर्ष २०६१ सालमा पबीका बुवा पदम गुरुङ्गले खर्च ब्यहोरिदिएर सन्तबहादुरलार्इ सेनामा भर्ती गरिदिनुभयो । त्यही वर्ष छोरा सुमनको जन्म भयो । भर्ती भएको अर्को वर्ष सन्तबहादुरले बुटवलकी एक मगर थरकी युवतीलाई श्रीमतीका रुपमा भित्र्याए । श्रीमानले गल्ती गरिहाले पनि पबीले श्रीमानको जागिर जाने र थुनिने अवस्था नहोस् भनेर बहुविवाहको उजु
कस्तो अचम्म : कहाँ हो त्यो ठाउँ जहाँ पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थाले !
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् । महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ । तर भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै । ब्राजिलको यो सहर मात्र होइन रुसमा पनि हालत यस्तै छ । केटाहरुको संख्या निकै कम छ केटीहरुको भन्दा जसका कारण महिलाहरुले जस्तो पाएपनि केटा खोजेर बिहे गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । अस्ट्रेलियामा पनि पुरुषहरुको खडेरी नै पर्न लागेको त्यहाँको एक अनलाइनले जनाएको छ । भिक्टोरियामा १ सय जना महिलामा केवल ९
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,879)
मगर्नी भाउजूको कथा (12,839)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,371)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,031)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,559)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,433)